BUHARI NA KWADO NKWADO N'AKPO MAKA ICC
Previous MINISTA NA-AHU MAKA UGBOELU KPUGHERE MBA NIGERIA AIR
Next NAPTIP NA-ANAPUTA MMADU 468 NDI E MERURU AHU
AKUKO UWA, Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News, Politics
BUHARI NA KWADO NKWADO N’AKPO MAKA ICC
President Muhammadu Buhari na Tuesday na The Hague kpọrọ ndị 123 na-ahụ maka ikpe iwu Rome nke Ụlọikpe Na-ahụ Maka Ikpe Na-ahụ Maka Mba Nile (ICC) iji kwado ikike ikpe ụlọikpe maka ikpe na-ezighị ezi na nrụrụ aka ọjọọ.
Buhari mere oku na isi okwu na nlekota ndi mmadu ka ha cheta ncheta nke iri ato nke iwu Rome nke ICC.
O kwuru na ICC siri ike ma dị irè nwere ikike izipu ozi dị ike banyere ntinye aka nke mba ụwa iji mee ka ndị mmadụ mara eziokwu, ozi nke ndị ahụ metụtara na ndị na-eme ihe ga-anụ.
” ICC siri ike ma dị irè pụkwara ime ka ọ bụrụ ihe mmegide maka mgbalị ikpe ziri ezi ọzọ, na-eme ka ohere ịchọta ya pụta.
“Ndị a nwere ike ịgụnye ikpe na-ezighị ezi nke nrụrụ aka site n’aka ndị na-arụ ọrụ obodo na-emebi mmepe mmepe nke mba ma na-atụba ndị amaala ọnụ na ịda ogbenye.
” Ndị a nwere ike ịgụnye ikpe ikpe ego na-ezighị ezi ebe mba na-egbochi ma ọ bụ ịghaghachi azụ nke akụ efu. Dika ndi Afrika na-emegide mmegide, ndi a bu ihe di m n’obi. ”
O mesiri mba ndi ozo ikpe na ntuli aka n’ozuzu ndi mmadu na Naijiria, n’efu na nke udo n’afo 2019, na-emegide ihe di egwu nke choputara ntuli aka n’ozuzu 2011, nke ICC choputara.
N’izo aka na ọdachi ndị dị na Naijiria mgbe emechara ntuli aka n’ozuzu 2011, nke ụlọikpe ahụ mere nyocha nke mbụ, onyeisi oche ahụ kwuru, sị: ” Naijiria na-akwadebe ịme ntuli aka n’ozuzu 2019 … M na-emesi gị obi ike na aka niile dị n’elu oche gbochie nlọghachi nke ọdachi dị otú ahụ.
“Anyị ga-eme ihe niile nwere ike ime iji jide n’aka na ndị Nigeria na-agba akaebe na omume nke nnwere onwe, ikpe ziri ezi na udo na 2019.”
Onye isi oche amalitela okwu ya site n’ịkele ndị ikpe nke Ụlọikpe maka ịhọrọ ‘nwa nwoke a ma ama nke Nigeria’ dịka Onyeisi.
” Ka m malite site n’ịkele gị, Onye ikpe Chile Eboe-Osuji, na nhoputa gị dịka Onyeisi nke Ụlọikpe Na-ahụ Maka Mpụ na International Criminal Court, na-ekele ndị ikpe nke Ụlọikpe maka ịhọrọ gị, nwa nwoke a ma ama nke Nigeria. Naijiria na-anya isi gị, Mr. President, ‘ka o kwuru.
“N’otu aka ahụ, otu ICC siri ike ma dị irè na-egosipụta ntinye aka nke mba ụwa na iwu nke iwu.
Buhari hot icc Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST new news post posts WORLD